Magaca Addis Ababa oo uu ka taagan yahay muran la mid ah kii Banaadir - Caasimada Online
Home Dunida Magaca Addis Ababa oo uu ka taagan yahay muran la mid ah...
Magaca Addis Ababa oo uu ka taagan yahay muran la mid ah kii Banaadir
Addis Ababa (Caasimada Online) – Baraha Bulshada ee Itoobiyaan-ka waxaa aad la’isugu khilaafsan yahay sida uu ku saxan yahay qoraalka magaca caasimadda Itooboya.
Addis Ababa, waa sida ay rasmi ahaan u qoran tahay balse Oromada, oo ah qowmiyadda ugu badan ee degan magaalada, islamarkaana sheegata, ayaa bilaabay ol’ole ay ku rabaan in xarfada qaar si kale loo dhigo.
Sida ay Twitter-keeda ku shaacisey mid ka mid ah gabdhaha Oromada ah ee shacabiyadda ballaaran ku leh bartaas, waxa ay sheegtay in sidan ku saxnaan lahaa magaca: “Addis Abeba!”
Waxa ay tiri, Gacallow Adduunoow! Waa Addis Abeba ee ma aha Addis Ababa!
Waxaa qoraalkeeda bulshada la sii wadaagay Mohamed Ademo oo aad caan uga ah bulshada Oromada ahna wariye sumcad ku leh aduunka, isaga waxa uu soo qoray liis erayo ay isaga egyihiin Oromada iyo Axmaarada isaga oo ku qishay in magaca Caasimadda sida uu hadda yahay loo leexiyey luuqadda Axmaara!
Hoos ka eeg ereyada uu ademo is barbardhigay
Waxaa xusid mudan in sidan oo kale magaca gobolka Banaadir waqtigii Taabit Cabdi Maxamed uu amray in loo beddelo Benaadir.